फ्याउरे गुन्डालाई कानुन बुझाउनुपर्छ – 701102 | Bishow Nath Kharel
फ्याउरे गुन्डालाई कानुन बुझाउनुपर्छ – 701102
Posted on February 14, 2014 by bishownath
एसएसपी रमेश खरेल
प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं
उनको बोलाइ जति नरम छ, पुलिसिङ त्यति नरम छैन । स्वच्छ छवि, दबाब अस्वीकार गर्ने स्वभाव र गुन्डागर्दीविरुद्ध आक्रामक पुलिसिङका कारण चर्चित र लोकप्रिय छन् एसएसपी रमेश खरेल । उनै खरेल काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको रूपमा सरुवा भएपछि यतिवेला पुन: चर्चामा छन् । काठमाडौं आएलगत्तै गुन्डागर्दी अप्रेसन थालेका उनले काठमाडौंमा काम थालेको ११औँ दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना १०बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा आधारित उनै खरेलसँगको कुराकानी :
काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका रूपमा तपाईंका योजना के छन् ?
मैले १०बुँदे कार्ययोजना बनाएको छु । प्रहरीलाई समाजको रोलमोडल बनाउने हाम्रो चाहना छ । यसका लागि प्रहरीको आचरण तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउने, गुन्डागर्दी, फरार अभियुक्त एवं दण्ड–सजाय तोकिएका अपराधीलाई तदारुकताका साथ पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने तथा कैदमुक्त भएका व्यक्तिउपर निगरानी राख्ने, भष्ट्राचार र दण्डहीनताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
यसैगरी अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्दै जाने, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा खबर संकलन गर्न स्थानीय सामुदायिक केन्द्र एवं विभिन्न संघसंस्थासँग समेत समन्वय तथा सहकार्य गरी चुस्त र भरपर्दो सञ्जाल स्थापना गर्ने, सामाजिक विकृति, जुवातास, वेश्यावृत्ति, दुव्र्यवहारजस्ता अनैतिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न कडाइ सुरु भइसकेको छ ।
दलाल, अपराधी, भष्ट्राचारी एवं दुई नम्बरी व्यक्तिसँग उठ्बस्, सम्पर्क तथा सम्बन्धबाट प्रहरी टाढा रहने, चोरी, लुटपाट तथा डकैती न्यूनीकरणका लागि प्रहरी परिचालनमा व्यापकता हुनेछ । समय–समयमा नागरिक समाजसँग शान्तिसुरक्षालगायत क्षेत्र समेट्ने गरी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राख्ने तथा प्रहरी कामकारबाहीबारे पृष्ठपोषण लिने, भए गरेका नीति निर्देशनको पालनाबाट आएको प्रतिफलअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरी त्यहीअनुसार योजना बनाएका छौँ ।
तीन वर्षअघि पनि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, पहिले र अहिलेमा के फरक पाउनुभयो
धेरै आयाम परिवर्तन भइसकेका छन् । अपराधको ट्रेन परिवर्तन भएको छ । पहिलेभन्दा अझ बढी जटिलता छ । अपराधको विश्लेषण गरेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउनेछौँ । पुलिस–पब्लिक पार्टनरसिपका आधारमा काठमाडौंलाई सुरक्षित सहर बनाउन चाहन्छौँ ।
प्रहरी कार्यालयमा दलाल नियन्त्रण गर्ने भन्नुभयो, यसअघि दलाललाई प्रहरीले चलाउँदै आएका रहेछन् नि ?
पहिलेका प्रहरीलाई म स्यालुट गर्छु, जसलाई मैले रिप्लेस गरेँ । उहाँ (एसएसपी सुबोध घिमिरे) अत्यन्तै इमानदार प्रहरी हुनुहुन्छ । अत्यन्तै सक्षम प्रहरी हुनुहुन्छ । बरु मलाई चुनौती बढेको छ । उहाँले गर्नुभएका राम्रा कामलाई म निरन्तरता दिनेछु । अझै केही राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
गुन्डागर्दी अप्रेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ, गुन्डागर्दी भयावह नै भएको हो त ?
छ त । तपाईहरूले पनि फिल गर्नुभएको होला । म त यिनीहरूलाई फ्याउरे गुन्डा भन्छु । विभिन्न पार्टी र व्यक्तिबाट संरक्षित फ्याउरे गुन्डाहरूलाई कानुन के हो भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ । कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
फ्याउरे गुन्डा भनेको के हो ?
(हाँस्दै) मैले एउटा नाम राखिदिएको हुँ ।
धैरै गुन्डा पार्टीबाटै संरक्षित छन्, हो
छन् । नेपालमा पार्टीबाट बाहिर मान्छे कमै छन् । आफू संरक्षित हुन्छु भनेर धेरै पार्टीमा लाग्ने गर्छन् । हामी सबै मिल्यौँ भने राजनीतिक संरक्षण भए पनि गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन ।
गुन्डाहरूलाई संरक्षण दिने राजनीतिक पार्टीका नेतासँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि ?
यो विषयमा नेताहरूसँगै कुरा गर्ने योजना त छैन । गुन्डाहरूलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन भन्ने चेतना नेतामै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
गुन्डा अप्रेसनमा नाम चलेकाहरूलाई पक्राउ गर्ने हो वा उनीहरूका गतिविधिका आधारमा कारबाही गरिन्छ ?
गन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्सको आधारमा चल्छौँ । सूचनाकै आधारमा अघि बढ्छौँ । काठमाडौं नबस्दा पनि मैले वाच गरिरहेको छु, नेपालका ९५ प्रतिशत फ्याउरे गुन्डा सुध्रेको देखेको छैन । काठमाडौंमा म पहिला पनि एसपी भएर बसेको थिएँ । अहिले एसएसपी भएर आउने सौभाग्य पाएको छु । बाहिर भए पनि म यहाँ भएका प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर आफूलाई अपडेट गरेको छु । यो अन्तरालमा उनीहरू सुध्रेको देखेको छैन । किन सुध्रिएनन् भन्ने कुरा एउटा पाटो होला ।
तपार्इं काठमाडौं आएपछि गुन्डाहरू काठमाडौंबाट भागेका छन् भनिन्छ । तर, तपार्इंको सरुवा भएपछि फेरि उनीहरू फर्किएर गुन्डागर्दी सुरु गर्लान् नि ?
हामी यसलाई निरन्तरता दिएर गुन्डागर्दीलाई जरैदेखि उखलेर फाल्नेछौँ । काठमाडौंमा म पछि एसएसपी ए, बी, सी, डी जो आएपनि उहाँले यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ । अपराध र अपराधीसँग सम्झौता कहिल्यै हुँदैन
ठूला गुन्डा पनि पक्राउ गरेका छन्, दबाबचाहिँ कत्तिको आएको छ ?
मलाई कुनै पनि दबाब आएको छैन, आउँदैन पनि । किन आउँदैन मलाई पनि थाहा छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो दबाब आएको छैन ।
केही प्रहरीको गुन्डा तथा तस्करसँग दोस्ती छ भनिन्छ नि ?
पहरीको गलत व्यक्तिसँगको सम्बन्ध पत्ता लगाउने सिस्टम बनाएका छौँ । सिनियरदेखि जुनियरसम्मका प्रहरीमाथि हामीले वाच गरिरहेका छौँ । बास्केटबाट कुहिएका स्याउलाई फालेर राम्रा स्याउ मात्र राख्नुपर्छ । खराब प्रहरी र राम्रो प्रहरीलाई हामीले छुट्याउनुपर्छ । हामी छुट्याउँछौँ ।
तपाईंले गुन्डागर्दी अप्रेसन चलाइरहँदा गुन्डागर्दी ऐनको मस्यौदा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ नि ?
अलपत्र परेकोभन्दा पनि पाइपलाइनमा छ । त्यो ऐनचाहिँ छिटै पारित हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
संगठित अपराध पनि बढ्दै छ भनिन्छ नि ?
त्यससम्बन्धी योजना पनि हामीले बनाएका छौँ । सबै योजना मैले एक्सपोज गर्न मिल्दैन । सबैसँग मिलेर अपराधविरुद्ध गोप्य अप्रेसन गर्दै छौँ ।
काठमाडौंलाई अपराधीहरूको सेल्टर हुनबाट रोक्न हामी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, सिआइबी, विशेष ब्युरोसँग सहकार्य गर्छाैं । तपार्इंहरूसँग सहकार्य गर्छांै । सबै मिलेर गुन्डागर्दी र संगठित अपराधविरुद्ध हामी लड्नेछौँ ।
यसअघिका काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखले मातहतका इन्चार्जको मोबाइल रेकर्ड गर्ने योजना ल्याउनुभएको थियो, त्यो योजनालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
उहाँले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको थियो । हामीले आफ्नै प्रहरीको मोनिटर गर्नुपर्ने अवस्था त नआउनुपर्ने हो । तर, मातहतका प्रहरीको गतिविधि मोनिटर गर्ने जुन सिस्टम उहाँले ल्याउनुभएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ । यो विदेशमा पनि हुन्छ । पुलिसलाई पुलिसिङ गर्ने भन्छ यसलाई । यो सिस्टमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ ।
Source : http://www.nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14920:2014-02-13-19-13-40&catid=36:features&Itemid=44